China 250 * 250mm Zvakananga Achigadzira kuti Square fekitari uye vagadziri | TUBO
Pipe Kugadzira Machina Nyanzvi
86-18034562377 (Kushanda nguva)
Kutungamira Kuumba kuKwere
120 * 120mm Zvakananga Achigadzira kune Square
150 * 150mm Zvakananga Achigadzira kune Square
200 * 200mm Zvakananga Achigadzira kune Square
250 * 250mm Zvakananga Kuumba kuKwere
300 * 300mm Zvakananga Achigadzira kuti Square
400 * 400mm Zvakananga Achigadzira kune Square
500 * 500mm Zvakananga Kuumba kune Chikwere
Cheka kuUrefu Mutsetse
Stainless Simbi Pipe Line
FFX Kugadzira Tekinoroji
Sheuri Uye Welder
HF Yakasimba Sate Welder
Kutonhora Kucheka Vakaona
Orbital hwokugaya hwakabvira Saw
Otomatiki Kurongedza Machine
HSS Vakaona Nereza
TCT Denderedzwa Yakaona Makasi
Zingi Spraying Chishandiso
Pneumatic Kusanganiswa kweSimbi Pneumatic Balers
Kucheka Kureba Mutsetse
Pneumatic Musanganiswa weSimbi Pneumatic Balers
(0.5-4.0) mm × 1300mm Slitting Mutsara
2 * 1300mm Yakatsetseka Line
Sheet Murwi Muchina
(0.4-4) × 1600mm Slitting Mutsetse
The mativi kana rectangular kuumba inoumbwa kunze pamberi chubhu nomoto.
Tinogona zvakare kuverengerwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Simbi Coil → Uncoiling → Flattening / Kuyera → Sheari & Kupera Kucheka → Coil Accumulator → Kugadzira → Welding → Deburring → Mvura Inodziya → Sizing → Kusimudza → Kucheka → Run-kunze tafura
1.compare nekutenderera kuita mativi & rectangle inoumba nzira, iyi nzira ndiyo iri nani kune chimiro chechikamu chemuchinjikwa, zvichienzaniswa, semi dhayamita yerudzi rwemukati idiki, uye brim yakati sandara, divi rakajairika, rakakwana chimiro chubhu.
2.Uye mutsetse wese mutoro wakaderera, kunyanya chikamu chesizi.
3.Uhupamhi hwetambo yesimbi inenge ingangoita 2.4 ~ 3% idiki pane iya yekutenderera ikaita mativi / akaenzana, inogona kuchengetedza mutengo wezvinhu zvakasvibirira.
4.Inotora iyo yakawanda-poindi yekukotama nzira, dzivirira axial simba uye parutivi abrasion, kuderedza iyo yekuumba nhanho nepo kuona mhando, ukuwo ichideredza simba kurasa uye roller roller.
5.Inotora iyo yakasanganiswa mhando roller pane yakanyanya kumira, inoziva kuti imwe seti ye roller inogona kuburitsa saizi dzese dzekwere / rectangular machubhu ane akasiyana maratidziro, inoderedza chitoro che roller, inoderedza mutengo ungangoita 80% pa chinotenderera, nekukurumidza mutero wemubhengi, ipfupisa iyo nguva pane chigadzirwa chigadzirwa chitsva.
6.All iwo roller ndiwo akajairwa masheya, hapana chikonzero chekutsiva iwo anotenderera kana shanduko chubhu saizi, ichingo gadzirisa chinzvimbo che rollers nemota kana PLC, uye ikaziva izere otomatiki kutonga; inoderedza zvakanyanya nguva yekutenderera, inoderedza kusimba kwevashandi, kugadzirisa kunatsiridza kwekugadzira.
Rectangular Tube 60 x 40 - 160 x 80 mm
Ukobvu hweMadziro 1.5 mm - 5.0 mm
Tube Kureba 6.0 m - 12.0 m
Line Speed Max. 60 m / min
Welding Maitiro Solid State Yakakwira Frequency Welding
Kugadzira Maitiro Zvakananga Kugadzira kune Square uye Rectangular Tubes
Muenzaniso Square Pipe (mm) Rectangular Pipe (mm) Ukobvu (mm) Kumhanya (m / min)
Pashure: Isimbi Isimbi Tube Mill
Zvadaro: Stainless Pipe Mill
1. Q: Uri mugadziri?
A: Hongu, Tiri mugadziri. Anopfuura makore gumi nemashanu R & D uye Chiitiko Chekugadzira. Isu tinoshandisa zvinopfuura zana nemakumi matatu nemakumi matatu emakumi matatu emagetsi emuchina ekugadzirisa zvigadzirwa zvedu.
2. Q: Ndeapi mazwi ekubhadhara aunogamuchira?
A: Isu tinoshanduka pamitemo yekubhadhara, ndapota taura nesu kuti uwane ruzivo.
3. Q: Ndeapi ruzivo iwe aunoda kuti ape chitaurwa?
A: 1. Kunonyanyisa Zvibereko Simba rezvinhu,
2.Yese pombi saizi inodiwa (mm),
3.Kukora kwemadziro (min-max)
4. Q: Ndezvipi zvakanaka zvako?
A: 1. Yepamberi fekitori yekugovana-shandisa tekinoroji (FFX, Direct Inoumba Chikamu) Inochengetedza yakawanda mari yekudyara.
2. Ino yazvino inokurumidza shanduko tekinoroji kuti iwedzere kuburitsa uye kudzikisa kusimba kwevashandi.
3. Anopfuura makore gumi nemashanu R&D uye Chiitiko Chekugadzira.
4. 130 CNC machining machina kuvimbisa zvigadzirwa zvedu zvakakwana.
5. Yakagadziriswa Maererano nezvinodiwa nevatengi.
5. Q: Une mushure mekutsigirwa kwekutengesa here?
A: Hongu, tine. Tine gumi-munhu-professional uye yakasimba yekumisikidza timu.
6.Q: Zvakadii nebasa rako?
A: (1) Rimwe gore garandi.
(2) Kupa zvikamu zvenguva yeupenyu pamutengo wemutengo.
(3) Kupa Video rutsigiro rwehunyanzvi, Kuisirwa munda, kutumwa uye kudzidziswa, online rutsigiro, MaInjiniya anowanikwa kumasevhisi michina mhiri kwemakungwa.
(4) Ipa hunyanzvi sevhisi yekugadzirisa nzvimbo, kugadzirisa.
China Zvakananga Achigadzira Ku Square
Zvakananga Achigadzira To Square
Zvakananga Achigadzira To Square Factory
Zvakananga Kuumba Kukwere Kwakatengeswa
Kwete 8 Xingbei Street, Shiyan Road, Shijiazhuang, Hebei, China.
123456546 Rova pinda kutsvaga kana ESC kuti uvhare